पर्वत जिल्ला अस्पतालमा उपकरणको सहायताबाट अक्सिजन प्लान्ट बनाइ अक्सिजन उत्पादन गर्न थालिएको छ ।
बुधवारदेखि अक्सिजन उत्पादन गर्न थालिएकाले अक्सिजनको अभावमा अस्पतालबाट बिरामीलाई अन्यत्र सिफारिस गरेर पठाउनुपर्नेे समस्या अन्त्य भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रू. ६० लाखको लागतमा सो प्लान्ट जडान गरिएको हो ।
“अब जिल्ला अस्पतालले अक्सिजनको अभावमा पोखरा वा काठमाडौँ बिरामी पठाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।” उक्त अस्पतालका ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोबिन्द पहाडीले भने, “१५ शैयाको यस अस्पताललाई आवश्यक पर्नेजति र माग भएर आएमा थप अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता प्लान्टको छ ।”
अक्सिजन नहुँदा अस्पतालले शल्यक्रियासमेत रोक्नु परेको थियो भन्दै उनले अक्सिजन ढुवानी गर्न समस्या पर्दा बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको बताए ।
प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन पाइपका माध्यमबाट सिधै शैयासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था अस्पतालले मिलाएको छ ।
आवश्यक परे अस्पतालले अक्सिजन उत्पादन गरेर वितरणसमेत गर्न सक्ने भएपनि सिलिण्डरमा भरेर राख्न मिल्ने व्यवस्था अहिले नभएकाले अक्सिजन कम्प्रेसर उपकरणका लागि पनि पहल भईसकेको अध्यक्ष पहाडीले बताए । अहिले उक्त अस्पतालमा दैनिक छ सिलिण्डरसम्म अक्सिजन खपत हुँदै आएको छ ।
एक सिलिण्डरमा १००लिटर अक्सिजन हुनेमा उक्त प्लान्टको उत्पादन क्षमता १६ सिलिण्डरसम्म रहेको अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा. शिशिर देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चिसो याममा अस्पतालमा अक्सिजनको अत्यधिक खपत हुने गरेको र अक्सिजनको व्यवस्थाले जटिल प्रकारका बिरामीको शल्यक्रिया गर्न सहज हुने भएको छ ।